YoYarLay - အလှပြင်ပစ္စည်းလေးတွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် နေရာချဖို့ နည်းလမ်းကောင်း (၆) ချက်
အလှပြင်ပစ္စည်းလေးတွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် နေရာချဖို့ နည်းလမ်းကောင်း (၆) ချက်
ရှုပ်ပွနေတဲ့ သင့်ရဲ့ မိတ်ကပ် အံဆွဲနဲ့ ဘီရိုတွေကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတော့။
အခုပြောပြမယ့် နည်းလမ်းတွေက ဗြုတ်စဗျင်းတောင်းဖြစ်နေတဲ့ သင့်ရဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းတွေကို သေချာနေရာချပေးဖို့ကူညီမှာပါ။ဒီလိုဆို သင့်ရဲ့ အိုင်းရှဲဒိုးတွေ ဒါမှမဟုတ် လက်သည်းနီပုလင်းတွေလည်း ခဏခဏ မပျောက်တော့ဘူးပေါ့။ကဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်
ပြည့်ကြပ်နေတဲ့ သင့်ရဲ့ အံဆွဲတွေ ဘီရိုတွေထဲကို အလှပြင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုထည့်လိုက်ပြီဆိုပါတော့။ အသုံးလိုလို့ ပြန်ရှာတဲ့အခါမှာ ရှာရခက်သွားတယ်ဟုတ်? ပလတ်စတစ်အကြည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ အံဆွဲကိုသုံးပါ။ ဒါဆို တိုလီမုတ်စ ပစ္စည်းတွေကို မွှေနှောက်ရှာဖွေစရာမလိုပဲနဲ့ အလွယ်တကူရှာလို့ရပြီလေ။
(၂) မျိုးတူပစ္စည်းတွေကို အကန့်လေးတွေနဲ့ခွဲထည့်ပါ
အံဆွဲတွေမှာ အလှပြင်ပစ္စည်းထည့်မယ်ဆိုရင် အကန့်လေးတွေသုံးပေးခြင်းအားဖြင့် ပိုပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ကြည့်ကောင်းစေမှာပါ။ အမျိုးတူပစ္စည်းလေးတွေ (ဥပမာ နှုတ်ခမ်းနီ၊ Blushe လေးတွေ) စုထားခြင်းအားဖြင့် လိုတဲ့အချိန်မှာ အလွယ်တကူယူသုံးလို့ရတော့ ပိုအဆင်ပြေသွားတာပေါ့။
(၃) နံရံပေါ်မှာ သံလိုက်နဲ့ ကပ်ထားပါ
တကယ်လို့ သင့်မှာ အလှပြင်ပစ္စည်းတွေတင်ထားဖို့ နေရာအပိုမရှိဘူးဆိုကြပါစို့။ သံပြားတစ်ပြားမှာ အဝတ်စအုပ်ပြီးအလှဆင်၊ ဘောင်ခွေပြီးတော့ နံရံမှာ ချိတ်ထားလိုက်ပါ။ သံလိုက်တုံးလေးတွေကို သင့်အလှပြင်ပစ္စည်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာ ကော်နဲ့လိုက်ကပ်ပြီးတော့ သံလိုက်ပြားပေါ်မှာ တင်ထားလိုက်ရုံပါပဲ။
အရောင်စုံဝယ်ထားတဲ့ သင့်ရဲ့လက်သည်းနီတွေကို သိမ်းဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးပါ။ အရင်ဆုံး ဖိနပ်ထည့်တဲ့ ဗူးတစ်ခုကို စက္ကူလှလှလေးနဲ့အရင် အလှဆင်လိုက်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့လက်သည်းနီပုလင်းတွေကိုထည့်၊ ပြီးတော့ လက်သည်းနီပုလင်းထိပ်လေးတွေမှာ ဗူးထဲက အရောင်လေး နည်းနည်းသုတ်ထားလိုက်။ အဲဒီလိုဆိုရင် ဘယ်ပုလင်းက ဘယ်အရောင်ဆိုတာ ထုတ်မကြည့်လည်း သိရပြီပေါ့။
(၅) ဘရက်ရ်ှတွေကို ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းမလဲ?
လွယ်ပါတယ် အဝကျယ်တဲ့ ပန်းအိုးလှလှလေးတစ်ခုထဲမှာ ရောင်စုံကျောက်တုံးလှလှလေးတွေထည့်လိုက်။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဘရက်ရ်ှလေးတွေကို စိုက်ထားလိုက်ရင် ကြည့်ကောင်းသွားပြီပေါ့။
(၆) ခုံပေါ်မှာ အလှဆင်ထားပါ
တချို့အလှပြင်ပစ္စည်းလေးတွေက ဗီရိုထဲထည့်ပြီး သိမ်းထားဖို့ မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် လှလွန်းနေတတ်တယ်။ အဲဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာ ဗန်းတစ်ခု(ဒါမှမဟုတ်) ဓါတ်ပုံဘောင်တစ်ခုကို ပက်လက်လှန်ပြီး Cosmetic လှလှလေးတွေကို တင်ထားလို့ရပြီပေါ့။
Mo Mo (ရိုးရာလေး)
Ref: Genius Ways to Store Your Beauty Products #Beauty Tip